Xadka Somalia iyo Kenya ee dhinaca Ceel Waaq oo lasoo dhoobay ciidamo badan oo Kenyan ah… – Hagaag.com
Xadka Somalia iyo Kenya ee dhinaca Ceel Waaq oo lasoo dhoobay ciidamo badan oo Kenyan ah…
Wararka ka imaanaya degmada Ceel Waaq ee goobolka Gedo ayaa sheegaya in xadka Soomaaliya iyo Kenya wadaagaan gaar ahaan dhinaca Ceel Waaq lasoo dhoobay ciidamo badan oo katirsan milatariga Kenya.
Ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka oo aad u badan iyo hub kale oo culus ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu arkayay xadka degmada Ceel Waaq, waxa ayna ciidankan sameynayeen dhaq dhaqaaqyo aan hore looga baran.
Dadka ku dhaqan degmada Ceel Waaq ayaa dareemaya cabsi xoogan ay ka qabaan ciidamada Kenya ee xadka lasoo dhoobay, waxa ayna ciidankan ka badan yihiin kuwii horey halkaasi lagu arki jiray.
Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamadan garab siinayaan maamulka Jubbaland gaar ahaan Madaxweyne kuxigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo loo diiday in uu galo degmooyin katirsan gobolka Gedo.
Madaxweyne kuxigeenka ayaa lasoo sheegayaa in uu joogo degmada Mandheera kadib markii loo diiday in uu soo galo degmooyinka gobolka, waxa uuna ku eedeeyay dowlada Soomaaliya in dhibaato ka wado gobolka Gedo.
Lama oga garabka ay xiligan ciidanka Kenya siin karaan maamulka Jubbaland ee laga diidan yahay gobolka Gedo, waxaana gobolkaasi jooga ciidamo kale oo Itoobiyaan ah oo iyana taageeraya ciidamada dowlada ee halkaasi jooga.
About Admin (10877 Articles)